romance - Synonyms of romance | Antonyms of romance | Definition of romance | Example of romance | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for romance
Top 30 analogous words or synonyms for romance
Gothic metal gothic fiction သည် horror နှင့် romance ကို ရောစပ်ထားသည်။ gothic metal တီးဝိုင်းများဖြစ်သော Cadaveria, Cradle of filth, Moonspell, Theatres des Vampires နှင့် Xandria တို့တွင် တွေ့နိုင်သည်။ Allmusic မှ ဝေဖန်ရေးဆရာ Eduardo Rivadavia က dramaနှင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်အလှအပသည် အမျိုးအစားအတွက် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ My Dying Bride သည် သေခြင်းနှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် အချစ်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် အချစ်နှင့် romance တို့သည် ကွဲပြားသော ရှုထောင့်မှ ထပ်တလဲလဲနီးကပ်လာသည်။
Pop punk Save the Day ၏ "Through Being Cool" (၁၉၉၉) album သည် pop punk အတွက်လမ်းခင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။ လွှမ်းမိုးခဲ့သောတီးဝိုင်းများမှာ Fall Out Boy, My Chemical Romance နှင့် Taking Back Sunday တို့ဖြစ်သည်။
Rock and roll အမေရိက ဟာသစာအုပ်များကဲ့သို့ လူငယ်ယဉ်ကျေးမှုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို လွဲပြောင်းပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ True Life Romance (၁၉၅၆)မှ There’s No Romance in Rock and Roll ထဲတွင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖီဆန်သော rock and roll – loving boy သို့ ဗြိတိန်တွင် post – war များကိုကန့်သတ်ထားခဲ့သည်။ rock and roll ယဉ်ကျေးမှုသည် ကြိုတင်တည်ရှိခဲ့သော Teddy Boy လှုပ်ရှားမှုကို သံယောဇဉ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကြီးမားသော မူရင်းမှ အလုပ်သမားလူတန်းစားနှင့် နောက်ဆုံးတွင် rocker များဆီသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ rock and roll တွင် ဆယ်ကျော်သက်ဈေးကွက်ဆီသို့ ကျော်ကြားသော ဂီတရှိလာခဲ့သည်။ မကြာခဏဆယ်ကျော်သက်ဖက်ရှင်များကို ကျင်းပခဲ့သည်။ Carl Perkins' Blue Suede Shoes (၁၉၅၆) သို့ Dion and the Belmonts A Teenager in Love (၁၉၆၀) တို့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
လေဒီဂါဂါ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် သူမ၏ ဗွေဆော်ဦး တေးအယ်လ်ဘမ် The Fame ကို ထုတ်ဝေခဲပြီးနောက် လေဒီဂါဂါကို အများက သတိပြုမိလာကြသည်။ ယင်းအယ်လ်ဘမ်မှ Just Dance နှင့် Poker Face စသည့် သီချင်းများဖြင့် နိုင်ငံတကာတွင် အောင်မြင်ကျော်ကြားလာသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် The Fame မှ သီချင်းတချို့နှင့် သီချင်းသစ်တချို့ ပါဝင်သည့် The Fame Monster ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး Bad Romance နှင့် Telephone သီချင်းနှစ်ပုဒ်မှာ အလားတူပဲ အောင်မြင်ခဲ့ရာ ကမ္ဘာတလွှား နယ်လှည့်သီဆို ဖျော်ဖြေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Post-rock ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်မှ The Velvet Underground ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး ကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှအုပ်စု Public image Ltd သည် တီထွင်သူများဖြစ်ပြီး NME က ပထမဆုံး post-rock အုပ်စုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့၏ ဒုတိယမြောက် အယ်လ်ဘမ် "Metal Box" (၁၉၇၉) တွင် traditional rock and roll တည်ဆောက်ပုံကို စွန့်လွတ်ခဲ့သည်။ dub နှင့် Krautrock တို့ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး (၁၉၇၉) "The Flowers of Romance" သည် သူတို့၏ တတိယမြောက်အယ်လ်ဘမ်သည် မူလဇစ်မြစ်နှင့်ဆိုင်သော ခွဲထွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး tape ဂီတမှ ထုတ်နှုတ်ယူထားသည်။
လီဒုံဝု အနုပညာလမ်းကြောင်းသို့ ၁၉၉၉ တွင်စတင်ဝင်ရောက်လာပြီး ရိုမန်တစ်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲ My Girl ၌ သရုပ်ဆောင်ပြီး ကြယ်ပွင့် ဖြစ်မလာမီ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ အမြောက်အများ၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပြသနေစဉ် ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ ပြည်တွင်းတင်မက အာရှတဝန်း နာမည်ကြီးလူကြိုက်များမှုက လီကို ကိုရီယားလှိုင်း(Korean Wave)ကြယ်ပွင့် ဖြစ်သွားစေသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ noir La Dolce Vita (2008), ရုံးခွင်ဟာသဇာတ်လမ်းဖြစ်သော Partner (2009), သဘာဝလွန်ဇာတ်လမ်း Scent ofaWoman (2011), ဘေ့စ်ဘောရို-ဟာဇာတ်လမ်း Wild Romance (2012), သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်း The Fugitive of Joseon (2013) နှင့် လက်စားချေသောဇာတ်လမ်း Hotel King (2014) တို့၌ ပါဝင်ခဲ့လေသည်။
ဆေးလိပ် ပထမကမ္ဘာစစ်နှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်များတွင် စီးကရက်သည် စစ်သားများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရာရှင်ပါပစ္စည်းတခု ဖြစ်လာပါသည်။ ၁၉၁၃-ခုတွင် ပေါ်ပေါက်သော Camel စီးကရက်သည် ပထမဆုံး ခေတ်ပေါ်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်သော စီးကရက်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၇၂-တွင် Marlboro (မာပိုလို) စီးကရက်သည် ကမ္ဘာ့ရောင်းအား အကောင်းဆုံး စီးကရက် ဖြစ်လာပါသည်။ စင်စစ် Marlboro ဆိုသောအမည်မှာ Men always remember Love because of romance only ဆိုသော ဝါကျမှ ရှေ့ဆုံးစားလုံးများကို ဆက်ခေါ်ဆိုခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ လင်းခေးဦးထွန်းမြင့်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဗာဂျီးနီးယားဆေးရွက်ကြီးကို ယူဆောင်လာပြီး လင်းခေးမြို့တွင် ဗာဂျီးနီးယားဆေးရွက်ကြီး လုပ်ငန်းကို စတင်ရင်း မြန်မာ့ဆေးလိပ်ခေတ်ကို ဆန်းသစ်စေခဲ့ပါသည်။
အီမို ၂၀၀၀အစောပိုင်းတွင် Jimmy Eat World နှင့် Dashboard Confessional တို့၏ platinum-selling အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ Emo သည် mainstream ယဉ်ကျေးမှုသို့ ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ aggressive မျိုးခွဲ scream ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ မကြာသေးခင်ကနှစ်များတွင် ဝေဖန်ရေးဆရာများနှင့် သတင်းစာဆရာများက emo ဆိုသော ဝေါဟာရကို များပြားစွာသော အနုပညာရှင်ဆီသို့ အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်။ multiplatinum ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများပါဝင်သည်။ Fall Out Boy နှင့် My Chemical Romance ပါဝင်ပြီး ခြားနားလွန်းသောအုပ်စုများမှာ Coheed and Cambria နှင့် Panic at the Disco အစသဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဂီတထဲသို့ပေါင်းထည့်ခြင်းအနေဖြင့် emo သည် ဝါသနာရှင်များနှင့် အနုပညာရှင်ကြားထဲတွင် အချက်အလက်ဆက်သွယ်မှု လက္ခဏာဖြစ်စေခဲ့သည်။ fashion, ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အပြုအမှုများဆက်သွယ်၍ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။
အီမို ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် emo သည် ကျော်ကြားမှုကျဆင်းလာခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းအချို့သည် emo အရင်းအမြစ်မှ ရွေ့ပြောင်းသွားကြသည်။ တီးဝိုင်းအချို့သည် ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ဥပမားအားဖြင့် My Chemical Romance ၏ album "Danger Days! The True Lives of the Fabulous Killjoys" သည် emoပုံစံမှ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Paramore နှင့် Fall Out Boy တို့သည် ၂၀၀၃အတောအတွင်း emo ပုံစံမှ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Panic at the Disco သည် သူ၏ album များဖြစ်သည့် "Too Weird to Live", "Too Rare to Diel" တို့သည် synthpop သည် ကျော်ကြားမှုကျဆင်းလာခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းအချို့သည် emo အရင်းအမြစ်မှ ရွေ့ပြောင်းသွားကြသည်။။ တီးဝိုင်းအချို့သည် ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် My Chemical Romance ၏ album "Danger Days! The True Lives of the Fabulous Killjoys" သည် emo ပုံစံမှ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Paramore နှင့် Fall Out Boy တို့သည် ၂၀၀၃ အတောအတွင်း emo ပုံစံမှ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Panic at the Disco သည် သူ၏ album များဖြစ်သည့် "Too Weird to Live", "Too Rare to Diel" တို့သည် synthpop ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲထားသည်။
မြန်မာ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်း ယုဇနဂါးဒင်းဟိုတယ်သည် ဝါကျွတ်ပွဲတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား များတွက် Elegant ၊ Classic Gold ၊ Royal Romance ဟူ၍ Wedding Package သုံးမျိုးခွဲထား ပြီး ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်မှ အောက် တိုဘာ ၁၄ ရက်အတွင်း ကြိုတင် စာရင်းပေးသွင်းထားသူများအား ဧည့်ခံမည့်လူဦးရေပေါ်မူတည်၍ ဖိတ်စာကတ်များကို မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ အဖြစ် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ခန်းမငှားရမ်းခအဖြစ် လူဦးရေ ၂ဝဝ မှ ၃၄ဝ အထိကို သုံးသိန်းကျပ်၊ လူဦး ရေ ၃၅ဝ မှ ၄၉ဝ အထိ ACES တေးဂီတဝိုင်းအပါအဝင် ကျပ်နှစ် သိန်း၊ လူဦးရေ ၅ဝဝ နှင့်အထက်ဆို ပါက တေးဂီတဝိုင်း၊ ငါးထပ်မင်္ဂလာ ကိတ် သို့မဟုတ် Guest Room တွင် တစ်ညတာတည်းခိုခွင့်များပါ ဝင်ပြီး ခန်းမကြေးပေးဆောင်ရန်မလို ကြောင်း သိရသည်။ ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်အရ Silver Elegant Package အတွက် လူတစ်ဦးလျှင် ၄၄ဝဝ ကျပ်နှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီး မင်္ဂလာမောင်နှံအဝတ်လဲခန်းအသုံး ပြုခွင့်၊ လျှောက်လမ်းတွင်ကော်ဇော နီခင်းပေးခြင်း၊ မင်္ဂလာစင်မြင့်တွင် ပန်းအလှငါးအိုးထားပေးခြင်း၊ နောက်ခံစာသားရေးပေးခြင်း၊ မုန့်ငါး မျိုး၊ ကော်ဖီနှင့် ရေခဲမုန့်၊ လက်ဖက် ပွဲနှင့် စံပယ်ပန်းရေနွေးတို့ပါဝင် သည်။ ဃူေျျငခ ွသိူ ဏခေုေါန အတွက် အထက်ဖော်ပြပါဝန် ဆောင်မှုများအပြင် ပန်းအလှတိုင် ၆ တိုင်၊ မုန့် ၅ မျိုး၊ ကော်ဖီ၊ ရေခဲ ုမုန့်များပါဝင်ပြီးလူတစ်ဦးစာအတွက် ၅၈ဝဝ ကျပ်နှုန်းသတ်မှတ်ထား သည်။ Royal Romance Package တွင် ပန်းအလှငါးအိုး၊ ပန်း အလှတိုင် ၈ တိုင်၊ Deluxe Room တွင် နံနက်စာအပါအဝင် တစ်ည တာတည်းခိုခွင့်၊ ထောပတ်ထမင်းနှင့် ကြက်သားဟင်း သို့မဟုတ် ဆိတ် သားဟင်း၊ ဘာလချောင်ကြော်၊ လိမ္မော်ရည်၊ ရေခဲမုန့်၊ လက်ဖက်ပွဲ တို့ပါဝင်ပြီး လူတစ်ဦးစာအတွက် ၅၈ဝဝ ကျပ်နှုန်းသတ်မှတ်ထား သည်။ ထို့အပြင် အခမ်းအနားမှူး၊ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးအစီ အစဉ်များအတွက် ခေါ်ယူငှားရမ်း လိုပါက မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် ကူညီ၍ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိ သည်ဟု သိရသည်။